လေ့ကျင့်ခန်းသည်အသက် ၄၀ နှစ်အောက်ရှိသောအမျိုးသားများအတွက်ပိုမိုကောင်းသော Erectile Function နှင့်ဆက်စပ်သည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးသားများလက်အောက်တွင် 40 အတွက် သာ. ကောင်း၏ Erectile ရာထူးအမည်နှင့်အတူဆက်စပ်နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်
နိဒါန္း။ လေ့လာရေးတိုးမြှင့်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တိုးတက်လာသော erectile function ကိုအကြားတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်အတူလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အထိုင်များတဲ့လူနေမှုပုံစံတို့အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ပြသခဲ့ကြသည်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာနုပျိုကျန်းမာအမျိုးသားများတွင်လက်ရှိရှိမရှိသို့မဟုတ်မသရုပ်ပြခံရဖို့မရှိသေးပါဘူး။
ရည်ရွယ်ချက်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာငယ်ရွယ်ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနှင့် erectile function ကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဓိကရလဒ်အစီအမံ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတှကျအဓိကအဆုံးမှတ်ခဲ့ကြသည်: နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏အမည် (IIEF) အတွက်မေးခွန်းတစ်ခုကိုတစ်ဦးလျှင် သာ. ကြီးတစ်ခုထက် point ရဲ့အခြေခံရမှတ်များအတွက် (ဈ) ကွဲပြားခြားနားမှု; (ii) ကို IIEF ၏အသီးအသီးဒိုမိန်းများအတွက်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုနှုန်းထက် သာ. ကြီးမြတ်သောတစ်ခုထက် point ရဲ့အခြေခံရမှတ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု; (iii) လေ့ကျင့်ခန်းစွမ်းအင်အသုံးစရိတ်; နှင့် (ဃ) ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခန့်မှန်းသည့် IIEF ပေါ်တွင်တွေ့မြင်အဖြစ်။
နည်းလမ်းများ။ သင်တန်းသားများသည်အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်ကြားပညာရေးဆိုင်ရာဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်မှုတွင်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်။ လူနာများကိုယ်တိုင် Paffenbarger ကာယလှုပ်ရှားမှုမေးခွန်းလွှာနှင့် IIEF ကိုကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသည်။ လူနာများကိုကာယလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့်အုပ်စုနှစ်စုခွဲထားသည် - အထိုင်များအုပ်စု (,18၁၄၀၀ ကယ်လိုရီ / တစ်ပတ်) နှင့်တက်ကြွသောအုပ်စု (> ၁၄၀၀ ကယ်လိုရီ / တစ်ပတ်) ။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသို့မဟုတ် Peyronie ၏ရောဂါအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ယောက်ျားများကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များ။ လူနာ ၇၂ ယောက်သည်ဤလေ့လာမှုတွင်အချက်အလက်အပြည့်အစုံရရှိခဲ့သည်။ အထိုင်များနေသောအုပ်စုတွင်လူနာ ၂၇ ဦး (၃၄.၆%) (,27 kcal / week) နှင့်တက်ကြွသောအုပ်စုတွင်လူနာ ၅၁ (၆၅.၄%) (> ၁၄၀၀ kcal / တစ်ပတ်) ။ အထိုင်များသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့ IIEF ၏အောက်ပါ domains များတွင်တိုးလာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်: erectile function ကို (34.6% vs. 1,400%, P = 51), အော်ဂဇင် function ကို (65.4% vs. 1,400%, P = 44.4), လိင်ဆက်ဆံမှုကျေနပ်မှု (21.6%) vs. 0.04%, P ကို ​​= 44.4) နှင့်အလုံးစုံစိတ်ကျေနပ်မှု (17.7% vs. 0.01%, P ကို ​​= 59.3) ။ IIEF (35.3% vs. 0.04%, P = 63.0) အပေါ်စုစုပေါင်းရမှတ်များအတွက်အထိုင်များအုပ်စုတွင်ပိုမိုကမောက်ကမဖြစ်မှုဆီသို့ ဦး တည်လမ်းကြောင်းတစ်ခု, နှစ် ဦး စလုံးအုပ်စုများ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒဒိုမိန်းရမှတ်များ (35.3% vs. 0.02%, P =) တွင်အလားတူခဲ့ကြသည်နေစဉ်ရှိခဲ့သည် 44.4) ။
ကောက်ချက်။ ကျနော်တို့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလူငယ်တစ်ဦး, ကျန်းမာသောလူဦးရေအတွက်အတည်ပြုမေးခွန်းလွှာဖြင့်တိုင်းတာပိုကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများလေ့ကျင့်ခန်းများ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်လိုအပ်, ဒါမှမဟုတ်ဒီလူအသက်အရွယ်အဖြစ် erectile function ကိုပေါ်တို့ကိုကင်းမဲ့နေကြသည်။ Hsiao W က, Shrewsberry AB, မောရှေ Ka, ဂျွန်ဆင်တီဗီ, Cai AW, Stuhldreher P ကို, Dusseault B, နှင့် Ritenour CWM ။ erectile function ကိုနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းများကအကဲဖြတ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်း 40 အောက်မှာယောက်ျားအတွက်ပိုကောင်း erectile function ကိုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။